Arahi-maso akaiky ilay andian-drahona ao amin’ny ranomasimbe Indianina. Hivadika ho rivodoza izany afaka roa andro. Any amin’ny 1660km avaratra atsinanan’Antsiranana no misy azy, omaly. Tsy misy fiantraikany amin’ny mety ho toetry ny andro eto amintsika izy ity ato anatin’ny dimy andro ho avy.
Ho maina sy manevokevoka ny andro amin’ity herinandro ity. Hitsitokotoko ny orana tandrifindrahona amin’ny faritry ny afovoantany, Melaky ary Bongolava ary hiitatra amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy izany, ny faran’ny herinandro.
Olona roa tao Infanadiana Ranomafana no natao fitiliana ary ahina ho mararin’ny pesta araka ny trangan’aretina niseho taminy. Mbola miandry ny valin’ny fitiliana nalefa any amin’ny Institut Pasteur de Madagascar hahafantarana marina ny fototr’aretiny. Efa noraisina ny fepetra rehetra ho an’ireo olona manodidina ny marary sy ny toerana nipetrahany. Efa nahazo fitsaboana ireo marary roa ahina ho voan’ny pesta ireo.